Ivaluva yeBhola yomanyano
Ukunkcenkceshela Ball Valve
I-Valve yokujonga i-PVC
Uhlobo lokucoca ulwelo-Y
Uhlobo lokucoca ulwelo-T
Uhlobo lokucoca ulwelo-Hydrocyclone
Isitishi sokucoca ngokuzenzekelayo
Drippers Kwaye Sprinkler
Abafezi abancinci abancinci
Abafaki beGun ezinkulu
Mini Valve And neZilinganisi
Ngesanti kubunzulu baphantsi Control Valve
PVC LayFlat umbhobho kunye neZilinganisi
Izixhobo kunye nabanye
Amathafa eGreenPlains yasekwa ngo-2009. njengenye yezona mveliso zonkcenkceshelo ezikhethekileyo, ezinikele ekunikezeleni izisombululo zeemveliso zonkcenkceshelo kubasebenzisi behlabathi, ikhokela eli shishini ngomgangatho ophezulu wemveliso kunye negama elihle kwimarike yamanye amazwe.
Emva kweminyaka engaphezulu kwe-10 yophuhliso oluqhubekayo kunye nokuyila, iGreenPlains iye yaba yeyona mveliso iphambili yokunkcenkceshela yase China kunye nehlabathi. Kwicandelo lemveliso yokunkcenkceshela, iGreenPlains iseke itekhnoloji yayo ekhokelayo kunye nezibonelelo zebrendi. Ngokukodwa kwicandelo le-valve ye-PVC, Icebo lokucoca ulwelo, iDrippers, kunye neeValve ezincinci kunye neZilinganisi, iGreenPlains iye yaba yenye yeempawu eziphambili zase China.
I-GreenPlains ikhethekileyo kwi-R & D, kwimveliso, kunye nentengiso yeemveliso zonkcenkceshelo. Umasifundisane imveliso ngaphezu kwe-400 ngumngundo. Iimveliso zibandakanya iVV Ball Valves, PVC Butterfly Valves, PVC Check Valves, Foot Valves, Hydraulic Control Valves, Air Valve, Filter, Drippers, Sprinklers, Drip tape, and Mini Valves, Fittings, Clamp Saddle, Fertilizer Injectors Venturi, PVC LayFlat Hose and Ukufakwa, izixhobo kunye nezinye iimveliso ezininzi. Inani leemveliso kunye neetekhnoloji zifumene amalungelo awodwa omenzi wechiza esizwe.
Indlela esiPhumelela ngayo
Iqela le-R & D lobungcali, sinikezela ngenkonzo yokumisa enye kuyilo lwemveliso, uyilo lwesikhunta kunye nokwakha ukuvelisa imveliso;
Sifumene isiqinisekiso sekhwalithi ye-ISO9001 kwi-SGS. Sifanelekile ngenkqubo yolawulo oluphambili kunye neqela lolawulo olunobunkunkqele. Sijonga kwaye siyilandele yonke inkqubo ukusuka ekubekweni kwe-PO ukuya ekuhanjisweni kwempahla kuyo yonke i-odolo nge-ERP, MES, inkqubo yolawulo lwendawo yokugcina izinto, kunye nenkqubo esemgangathweni ye-ISO9001; silawula umgangatho wayo yonke imveliso enye kwaye sinikezela ngemveliso engabizi kakhulu kunye nenkonzo kubathengi bethu kwihlabathi liphela.
Umzi-mveliso weBafang, eDacheng, kwisiXeko saseLangfang, kwiPhondo le-Hebei, China
Sisebenzisa ikuki ukwandisa uyilo lwewebhusayithi yethu. Ngokuqhubeka notyelelo lwakho kwiwebhusayithi, uyavuma ukusetyenziswa kweicookies.Kulungile